ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ . . .
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, July 10, 2007
ငါသာ ညီတော် နေရာမှာဆိုရင် ဘုရင်ကြီးကို ဒီလိုပြောမယ်..
“ခွေးရဲ့ ခြေထောက်မှာ ခဲဆွဲပြီး လေးပေနက်တဲ့ ရေကန်ထဲ ပစ်ချပါ။ ပြီးရင် ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဲဒီလို သတ်ပါ” လို့
(ခွေးအများစုသည် လေးပေထက်နိမ့်သည်ဟု ယူဆပြီး လူအများစုသည် အနည်းဆုံး လေးပေထက်မြင့်သည်ဟု ယူဆပြီး တွေးကြည့်တာပါ)
နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး စဉ်းစား စဥ်းစား
လက်ပေါ်နဖူးတင်ပြီး စဉ်းစား စဉ်းစား
အိပ်မပျော် ထိပ်ပေါ်ခဲကျ အဲလေ..ယောင်လို့
ခွေးကို ဘယ်လိုသတ်ရမှန်းကို သိဘူး
သတ်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ သတ်ရလွန်းလို့ မနောကံ အကုသိုလ်တွေလဲများပြီး
ဒယ်အိုးကို သွားရမလားတောင် မသိဘူး အီးဟီး 
ပန်းပေးပြီ အဖြေ မြန်မြန်ပြောပြပါတော့
မမီ >> အဖြေပြောဖို့နဲနဲ စောပါသေးတယ်။ ဟီးဟီး နဖူးပေါ် လက်တင်၊ လက်ပေါ် နဖူးလေး တစ်ရက်လောက် ထပ်တင်လိုက်ဦးနော်။
ညီညီရေ … ငါပြောဖို့တစ်ခုလိုသွားတယ်။ ညီတော်က နန်းရင်ပြင်ထဲမှာပဲ ခွေးကိုသတ်လိုက်တာကွ။ အနားမှာ ရေကန်မရှိဘူး။ အဟီး . . . ။
အဖြေက နဲနဲတော့နီးစပ်နေပြီ ထပ်စဉ်းစားလိုက်ဦး။
အမဲသားကို အဆိပ်လူးပြီး ခွေးရှေ့မှာ ပစ်ချထားလိုက်ပါတယ်။
အာဏာသားတွေကလဲ အမဲ့သားလုံးကို အဆိပ်လူးပြီး မင်းသားရှေ့မှာ ပစ်ချထားပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
လူနဲ့ ခွေးရဲ့ physically ကွာခြားချက်ကို အရင်ရှာပါမယ်။ ( ဥပမာ လူမှာ ပါးစပ်တခုရှိပြီး ခွေးမှာ ပါးစပ် ဘယ်နှစ်ခုရှိ သလဲ ...)လူမှာမရှိပဲ ခွေးမှာပဲရှိမယ့် အစိတ်အပိုင်းလေးကို အသုံးချပြီး အဲဒီခွေးကို သေအောင်လုပ်ပါမယ်။ ဟုတ်မယ် ထင်တယ်နော်...၊ ဒါဆို ... ဆက်မဖြေတော့ဘူး...(ဒေးလ်ကာနက်ဂျီ ကတောင် အဲဒါလေးကို သတိတရရှိလို့ ပြောခဲ့သေးတယ် )
ခွေးရှေ့ကို အဆိပ်သုတ်ထားတဲ့ အမဲသားတုံးပစ်ချတာဟာ ခွေးကိုအဆိပ်ခတ်သတ်တာနဲ့တူတူပါပဲ။ အဲဒါဆိုသူလဲ အဆိပ်လူးထားတဲ့အမဲသားတုံးကိုစားကိုစားရပါလိမ့်မယ်။ ခွေးက စားတာကို သူကခွေးမဟုတ်လို့မစားဘူးလို့ လုပ်လို့မရပါဘူး law shay ရေ။ အဖြေမှားနေပါသေးတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဥာဏ်စမ်းလေးကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ခွေးနဲ့ လူရဲ့ မတူညီတဲ့အချက်တွေကို အခြေခံပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလဲ အဲဒီ့လိုပဲ စဉ်းစားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ညီညီက အရပ်ကိုစဉ်းစားပါတယ်။ နန်းရင်ပြင်ထဲမှာသတ်လိုက်တာမဟုတ်ရင်တော့ ညီညီအဖြေဟာ လဲ မှန်ကန်ပါတယ်။ Law Shay က အသိဥာဏ်ဆိုတဲ့ မတူညီမှုကိုစဉ်းစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းမိန့်ဆိုတဲ့ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် ညီတော်က မစားရဘူးအဆိပ်လူးထားတယ်ဆိုတာကို သိပေမယ့် မစားလို့မရဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ အချို့လဲ အမြီးဆိုတာကို စဉ်းစားမိကြပါတယ်။ အမြီးကို မီးရှို့မယ်၊ အမြီးကိုဖြတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အဖြေတွေက ခွေးကို အမှန်တကယ်သေစေဖို့အတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။ ထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အခြားသတ်စရာနည်းလမ်းတွေလဲ ထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ညီတော် တကယ်သတ်လိုက်တာကတော့ ခွေးကို အမြီးကနေကိုင်ပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ရိုက်သတ်လိုက်တာပါ။ ခွေးက သေသွားပေမယ့် အာဏာပါးကွက်သားတွေကတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်လိုက်ပါဘူး။ ညီတော်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ အဖြေမမှန်တဲ့သူတွေ သေဒဏ် … ဒန်တန့်တန် …။း-)
ခွေးကို လှေကားအမြင့်ကြီးကနေ အောက်ဆင်းခိုင်းလိုက်မယ်လေ။ မရဘူးလား။ လှေကားပေါ်တင်တာနဲ့တင် ခွေးက ခြေကားယား လက်ကားယားနဲ့ ကျသေပေမယ့် လူကတော့ အသာလေး ဆင်းသွားရုံပေါ့-
အချို့ခွေးတွေများ လှေကားအတက်အဆင်းကို လူတွေထက်တောင် ကျွမ်းသေး ကိုစစ်အိမ်ရေ။ ဆပ်ကပ်တွေထဲမှာတွေ့ဘူးတာပဲ။း-)
အမြီးကနေ ကိုင်ပေါက်လိုက်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကိုနေဘုန်းလတ်မှာ အမြီးရှိလား။ ဒါဆိုရင် အဲဒီနည်းက ရမှာ မဟုတ်ဘူး :D
surpricing that this king's brother has some idea to save his life. Imagine if Thanswe or his bro, I don't thibk they has some ideas. haha
Then poor thing. (may be they go and ask Khin Nwent)
Ohhh! sorry. They will go and ask Ko NayMyo :P
hand nae thet lite pop!! dog head ko hand nae thet pay lite.!
1 phay phayathat kyi p that tae ni ko thone pay par ,nyi answe mhan lar ma thi bu